SIDA LOO ILAALIYO KAROOTADA ILAA GUGA WAA CUSUB: SIYAABAHA UGU CAANSAN EE LOO BADBAADIYO ASALKA THIS JIILAALKA EE GURIGA - WIXII MARTIDA
Dagaalka loogu talagalay beergooyska - hababka ugu wanaagsan ee aad uga ilaalin karootadaada cusub ilaa guga soo socda!
Karootada waa mid caan ah, dhadhan fiican leh iyo mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee miiskeena wakhti kasta oo sannadka ah, gaar ahaan xilliga jiilaalka. Way adag tahay in la sii wado ilaa guga, marka loo eego khudaarta kale.
Xididdu waxay leedahay maqaar aad u jilicsan, sababtoo ah waxyeelo taas oo khudradda si dhaqso ah uga sii dari karto. Sidoo kale, ma aha noocyo kala duwan oo dabacasaha lagu kaydin karo waqti dheer.
Maqaalkeena waxaan ka hadli doonaa noocyada ugu fiican iyo siyaabaha lagu kaydin karo karootada cusub. Waxaan sidoo kale ku talineynaa in aad daawato fiidiyowga waxtar leh mawduuca.
Qaababka qaabdhismeedka khudradda ee goosashada
Noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah iyo nooca unugyada ayaa ku habboon kaydinta jiilaalka.. Dalagga aasaasiga ah waa inuu ahaadaa saxda saxda ah, leh dhalid sare iyo awood u lahaanshaha kaydinta mudada dheer. Noocyada hore ee karootada waxaa sida ugu wanaagsan loo isticmaalaa isla markiiba ka dib goosashada, ma baxaan jiilaalka, maadaama aanay ku haboonayn da 'sii dheeraaday.
Ma hayn karaa cayriin ilaa guga?
Waxaa jira siyaabo badan oo loo ilaaliyo dabacasaha muddo dheer, inkastoo xawliga dalagyada khudradda ah. Waxaa jira siyaabaha ugu caansan ee loo ilaaliyo dabacasaha cusub, mid kasta oo ka mid ah taas oo u baahan in la raaco xeerarka qaarkood.
Mid ka mid ah xeerarku waa goosashada wakhtiga, sida karootada horay loo qoday waqti uma haynin inay isku ururiyaan xaddiga lagama maarmaanka ah ee sonkorta, taas oo si xun u saameeysa dhadhanka. Xilliga xididada, dheeraadka ah ayaa la dhigay, liddi ku ah, waxay soo uruurisaa xad-dhaaf ah amino acids iyo sonkor, taasoo ka dhigaysa khudradda soo jiidata cayayaanka.
Waa muhiim: Xitaa si fiican loo qoday, karootada caafimaad leh iyo mid weyn, oo leh dhamaan shuruudaha kaydinta, waxay ka sii dari karaan (rogaa madow, kallana) hal bil kadib kaydinta. Tani waxay sababi kartaa noocyo kala duwan oo rooti ah. Waxaa jira noocyo ku haboon kaydinta qaboobaha iyo kuwa aan ku haboonayn tan.
Shaxda ugu fiican iyo kuwa ugu dheer ee la xajiyey:
Noocyada ugu habboon ee ilaalinta muddada-dheer waa noocyo leh xididdada gaaban.Tusaale ahaan, karootiga reer Paris. Si aan loogu jahwareerin dhammaan noocyada kala duwan ee dabacasaha, markaad dooranaysid, waa inaad xasuusnaataa sifooyinka qaarkood.
Waxaa ugu wanaagsan in la iibsado noocyada taranta taranka ee khudaarta cagaaran kuwaas oo lagu habeeyey jawiga degaanka.
Miraha foomka la dheereeyey waxay ku habboon yihiin lakab, carrada oksijiinta.
Wixii kaydinta dalagga ku haboon, lagu beeray xagaaga hore.
Karootada wareega ah ayaa si dhaqso ah u bislaan, laakiin soo saar dalag yar.
Noocyada soo saarayaasha ajnabiga ah ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo qurux badan, laakiin waxay u baahan yihiin xaalado kordhay iyo bacriminta ciidda.
Marka aad dooranaysid noocyo kala duwan oo karooti ah, fiiro gaar ah u yeesha inay iska caabbiyaan.. Dareere kasta oo dusha sare ah waa bilaash ah helitaanka bakteeriyada iyo fungi. Khudradda khalkhalka leh looma dhigi doono muddo dheer xitaa xaaladaha wanaagsan.
Waxaa jira dhowr shuruuc oo fudud oo ah marxaladda diyaarinta, oo la raacayo ka hor inta aan la saarin dalagyada khudradda ah ee kaydinta muddada dheer.
Maalinta qashinka ah, sariiraha leh dabacasaha uma baahna in la waraabiyo.
Dhalada dusha sare ayaa lagu duri karaa isla markiiba ka dib goosashada, maadaama ay ka soo baxayso qoyaanka midhaha.
Ka goynta dushooda, dalagga ayaa qallajiyay qorraxda 2-3 saacadood.
Toddobaadka dhexdiisa, xididdada waa in lagu hayaa heerkul ah 10-14 digrii.
Ka hor inta goynta karootada si meel loo kaydiyo, waxaa lagama maarmaan ah in la xalliyo oo laga saaro khudradda xididka aan habboonayn.
Digniin: Karootada loo diyaariyey kaydinta muddada dheer waa inay ahaato mid cufan, bilaash ah oo biqilka ah, oo aan lahayn qadhimo-qaniinyo oo aan xor ka aheyn farsamoyinka. Khudradda tufaaxa tayada leh ayaa si fiican loo haynayaa ilaa guga
Sidee loo kaydiyaa jiilaalka guriga?
Khibradda beeralayda ayaa muujisay in aanay muhiim ahayn in la nadiifiyo dabacasaha dhulka haddii ay ku koraan carrada qoyan. Dalagyada rootiga la qalajiyey waxaa lagu kaydiyaa waqti dheer. Sidoo kale, ha dhaqin dalagga ka hor kaydinta. Haddii lagu soo ururiyay cimilada qoyan, ka hor inta aan la dhigin karootada ee kaydinta, waa in si wanaagsan loo qalajiyo hooska. Dhowr maalmood ka hor goynta midhaha, waa in la qaboojiyo heerkul ah ilaa 2 digrii.
Heerka xiga waa diyaarinta meel lagu keydiyo beerashada. Qolku waa inuu ahaadaa mid qallalan, heerkul ilaa 12 digrii iyo qoyaan dhexdhexaad ah. Qolka iyo weelka loogu talagalay in lagu xiro midhaha waa in lagu nadiifiyaa lime ama sulfate copper. Miraha loo kala soocay waa in lagu daboolaa weelasha la kariyey.
Waxaa jira meelo dhowr ah oo lagu keydiyo dabacasaha - waxay noqon kartaa maqnaansho, maqaar, garaash, barkad kulul.. Si loo kordhiyo ilaalinta beergooyska, waxaa jira dhowr siyaabood. Qaab waliba, waa inaad doorataa heer-kulka heerkulka ee ugu fiican iyo hubinta wareegga hawada oo fiican iyo qoyaanka si fiican.
Miraha waxaa lagu dhajiyay sanduuq sanduuq qoyan, iyada oo aanad taabanin midba midka kale. On top of karooto, sidoo kale, daboolay ciid. Lakab waa la soo celin karaa.
Waxay la mid yihiin kaydinta ciidda. Matoorka dhaadheer ayaa ugu habboon, phytoncides oo ka hortagaya faafidda bakteeriyada.
Daawo fiidiyowga ku saabsan keydinta dabacasaha sida balka:
Bacda balaastigga ah
Qaado si siman iyo xataa miraha karootada. Pre-khudaarta si fiican u dhaqo oo qalaji yar. Kadibna waxay isku laabaan bac aan ku xidhnayn si adag si aaney xididadu u jilcin.
Fiiri fiidiyowga ku saabsan kaydinta karootada bac caag ah:
Kuwa aan haysanin saldhig, googo ama garaash, waxaa laga yaabaa in lagu taliyo in lagu keydiyo karootada la qaboojiyey. Si arrintan loo sameeyo, miraha waxaa la dhaqaa, lagu jajabiyaa si kasta, ku rid bacaha balaastigga oo ku rid barafeeyaha, adoo isticmaalaya sida loo baahan yahay.
Ka daawo fiidiyowga ku saabsan barafka jarjaran ee bac balaastig ah:
Inta lagu jiro kaydinta, karootada ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay saameeyaan cudurada qaarkood:
Sclerotinosis ama kalluun cad. Karootada waxay noqdaan kuwo jilicsan, suufka suufka ahi waxay u muuqdaan dushiisa, taas oo ku dhici karta miraha deriska ah.
Bakteeriyada qoyan ee qoyan burburin karaa dalagga. Iyadoo jiritaanka cudurkan, xididdada ayaa kala jajaban, oo ka bixiya ur ur aan fiicnayn.
Alternaria ama kalluun madow. Marka lagu kaydiyo dusha sare ee dabacasaha muuqaalka la riixay dhibco mugdi madow, ubax cagaaran-cagaaran (mycelium).
Fomoz ama kallana qurux badan. Xayiraadda joogitaankeeda, midhaha ayaa noqda dabacsanaan iyo godadka, hela midab madow-brown.
Si loo ciribtiro dhibaatooyinka, waxaa lagama maarmaan ah in sunta laga saaro ciidda, geeddi-socodka abuurka laga sameeyo marinnada, goobaha kaydinta ee leh jeermiska, ilaalinta heerkulka ugu fiican iyo qoyaanka qolka, ku keydin miro caafimaad leh jiilaalka.
Qof kastaa wuxuu doortaa habka ugu habboon ee loo ilaaliyo dalagga. Waxaa muhiim ah in la doorto habka ugu wanaagsan ee kaydinta karootada, iyada oo la tixgelinayo suurtogalnimada abuurista xaaladaha lagama maarmaanka u ah tan. Iyada oo la raacayo xeerarka fudud, waxaad u haysan kartaa goosashada wakhtiga dheer waxayna siineysaa qoyska oo dhan khudaar cusub oo caafimaad qaba jiilaalka oo dhan.